Sirdoonka Somalia oo Sheegtay inay Qabteen Raashin Dhacay, Halkii laga sugayay inay Qaraxyo qabtaan. – Hornafrik Media Network
Qoraal la soo dhigay Barta Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay inay Ciidamadoodu qabteen Raashin Dhacay oo ku jiray Dekadda Muqdisho.
NISA waxay sheegtay in Howlgal Sirdoon oo guulaystay lagu qabtay Kumanaan Loor oo Raashin Dhacay ah Caawa Fiidkii, Waxaana Qoraalkaasi lagu xusay in Wasiirka Amniga Gudaha iyo Ku Simaha Taliyaha NISA ay tageen Dekadda oo ay soo arkeen Raashinkaasi, laguna wareejiyay Hogaanka Baarista NISA Kiiskan.
NISA ka mid ma ahan Howlaheeda Faayadhowrka iyo Hubinka Raashinka, Waxaana ay Shaqadeedu tahay inay aruuriso Xogta iyo Xuuraanka Abaabuladda Siyaasadeed ee ka dhanka ah Qaranka iyo aruurinta Xogaha Amniga Dalka, balse taa badalkeeda waxay soo bandhigtay Caawa inay qabatay Raashin dhacay.
Ciidanka Booliska ayaa leh qayb gaar ah oo howlahan u tababaran, kuwaasoo la shaqeeya Hay’adaha qaabilsan Faayadhowrka, Koontaroolka Raashinka IWM, Waxayna Booliska laftigiisu howshan kala shaqaynayaan oo kaliya Dowladda Hoose ee Muqdisho iyo Hay’adaha Qaran ee ku shaqada leh.
Amniga Dalka ayaa muddooyinkan sii xumaanayay, mana jirin waxay ka qabatay NISA, sidoo kale Dalka waxaa la galiyay Xaalad dagaal, marna iskuma howlin NISA inay Ciidanka ka caawiso Xogta iyo Xuuraanka ku saabsan Diyaargaroowga Argagixisadda Alshabaab.